किशोर पर्चेको दुरुपयोग रोक्दै - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी प्रेस औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार समुदाय कम्पनी, समाचार कल्याण खेलहरु समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार भारी खेल
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> किशोर पर्चेको दुरुपयोग रोक्दै
किशोर पर्चेको दुरुपयोग रोक्दै
अभिभावकहरू सँधै तिनीहरूको किशोरावस्थाको जीवनमा लुकेका खतराहरू खोजिरहेका हुन्छन्, तर प्यारेन्टल रडार सजिलै प्रिस्क्रिप्सन ड्रगको दुरुपयोग गर्न सक्छन्।
प्रिस्क्रिप्शनहरू पहुँच योग्य र व्यापक रूपमा वितरित छन्। प्रिस्क्रिप्शन बोतल हुनु सामान्यतया गैरकानुनी औषधि उपकरणहरूले गर्ने शंकालाई जगाउँदैन, त्यसैले पर्चा दुरुपयोग लुकाउन सजिलो हुन्छ। र किनभने प्रिस्क्रिप्शनहरूको स्वास्थ्य देखभालमा उपचारात्मक र उपचार मूल्य रहेको छ, यी औषधीहरू खतरनाक देखिँदैन।
यो गाईडले तपाईंलाई तपाईंको किशोर किशोरीहरूसँग नयाँ कुराकानीको लागि सुरूवात विन्दु, थप अनुसन्धानका लागि विचारहरू, र कसरी आफ्ना बच्चाहरूलाई पर्सनल दुरुपयोगबाट सुरक्षित राख्नको लागि सुझावहरू दिन्छ।
पर्चेको दुरुपयोग र ओभर-द-काउन्टर औषधीहरूको खतराहरू
औषधीहरू जोखिम-मुक्त छैनन्, जब स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सुपरिवेक्षण अन्तर्गत लिइन्छ। त्यहाँ खतराहरू छन्, तर तिनीहरू एक विशेषज्ञले होसियारीपूर्वक खुराकको जाँच, शरीरमा लागुपदार्थको प्रभावको अनुगमन, र औषधिले क्षति नगरेको निश्चित गर्न परीक्षणहरू चालु गर्दै आएका छन्।
किशोर किशोरीहरूले लागूऔषधको दुरुपयोगको लागि त्यस्तो होइन। यदि तिनीहरूमा केही गलत भयो भने फर्किन तिनीहरूसँग चिकित्सक हुँदैन।
पर्चेको औषधि दुरुपयोग को संकेत सूक्ष्म हुन सक्छ। आमाबाबु र विश्वासिलो वयस्कहरूले आफ्ना किशोरावस्थाका बच्चाहरूलाई मद्दत गर्ने औषधि दुरुपयोगको संकेत र शारीरिक लक्षणहरू जान्न मद्दत गर्दछन्।
पर्चेको औषधि दुरुपयोग संकेत र लक्षणहरु
यदि तपाइँको बच्चाले नुस्खेको दुरुपयोग गरिरहेको छ भने तपाईले व्यवहारमा परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ।
गतिविधिहरू बेवास्ता गर्दै
राती अबेरसम्म बेपत्ता
रद्दीटोकरीमा खाली औषधि बोतलहरू
प्रिस्क्रिप्शनहरू तपाईले चिन्नुहुन्न
अतिरिक्त डाक्टर भेट वा फार्मेसीमा यात्रा, निर्धारित औषधि को लागी प्रारम्भिक रिफिल, orlost प्रिस्क्रिप्शन औषधि (जो अतिरिक्त रिफिल प्राप्त गर्न को लागी एक बहाना हुन सक्छ)
निन्द्रा वा भूख परिवर्तनहरू
अचानक वजन घटाउने वा तौल वृद्धि
सम्भव फिर्तीको स such्केतहरू जस्तै पसिना बग्ने, भ्कुँडीएको महसुस गर्ने, र dilated विद्यार्थीहरु को रूप मा
ओपिओइड प्रयोग: निन्द्रा, कब्ज, समन्वयको अभाव, ढिलो सास फेर्दै
उत्तेजक प्रयोग: अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, अनियमित मुटुको धडकन, उच्च शरीरको तापमान
शाब्दिक र एन्टी-फिक्स्ड औषधि प्रयोग: चक्कर आउँछ, असंतुलित वा अस्थिर हिड्ने, निन्द्रा, धीमा सास
चरम मुड स्विings्स
ओपिओइड प्रयोग: उत्साह वा उच्च महसुस, मानसिक भ्रम, पीडा संवेदनशीलता मा परिवर्तन
उत्तेजक प्रयोग: युफोरिया, बेचैनी, ओभरएक्टिक दिमाग, व्याकुलता, चिन्ता, असामान्य सतर्कता
Sedative र विरोधी चिंता औषधि प्रयोग: घटाई एकाग्रता, मानसिक भ्रम, स्मृति समस्याहरु, स्लोर भाषण
प्रत्येक व्यक्ति फरक हुन्छ, त्यसैले तपाईंको किशोरले सबै संकेतहरू नदेखी सक्दछ।
अन्य लक्षणहरू सम्भव छन्, त्यसैले केहि असामान्यको लागि हेर्नुहोस्।
केही किशोरहरू केही वा सबै तिनीहरूको लक्षणहरू लुकाउन सक्षम छन्।
याद गर्नुहोस् कि त्यहाँ एक वैधानिक अन्तर्निहित चिकित्सा कारण पनि लागू हुन सकेन जुन ड्रगको प्रयोगसँग सम्बन्धित छैन (उदाहरणका लागि, चक्कर आउनु पनि मुटुको अवस्था हुनुको सामान्य संकेत हो)।
यदि तपाइँ तपाइँको बच्चामा यी लक्षणहरू र लक्षणहरू मध्ये कुनै चिन्नुहुन्छ भने, नडराउन महत्त्वपूर्ण छ। यो सूची चेतावनी संकेतहरूको लागि गाईड हो, निश्चित निदान होइन। हुनसक्छ तपाईको किशोर छ वास्तवमा ड्रग्सको दुरुपयोग गर्दै, ऊ वा उनी तपाईलाई एक भरपर्दो र हेरचाह गर्ने वयस्क उपस्थिति हुन आवश्यक छ जसले पर्चा औषधि र पर्चेको औषधि दुरुपयोगको सम्भावित खतरहरूको बारेमा सत्य प्रदान गर्न सक्छ।
कसरी आमाबाबुले किशोर किशोरी पर्चेको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्न सक्छन्: आमाबाबु, शिक्षक, र सल्लाहकारहरूका लागि लिपि
किशोर-किशोरीहरूले उनीहरूको वरपर वयस्कहरू सुन्छन् र तपाईंसँग प्रभाव पर्न सक्छ-तथ्या .्कहरूले यसलाई प्रमाणित गर्दछ। बच्चाहरू हुन् Drugs०% कम औषधिहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना कम छ जब उनीहरूका आमा बुबा उनीहरूसँग नियमित रूपमा उनीहरूसँग खतराहरू छलफल गर्छन् । अक्सर किशोर किशोरीहरू हामीले आशा गरेभन्दा बढी विवेकशील हुन्छन् र सकारात्मक प्रभावमा ग्रहणयोग्य हुन्छन् यदि तिनीहरूले बाहिरी रूपमा नदेखाए पनि।
दुर्भाग्यवस, प्रमाणहरूले सुझाव दिन्छ कि धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूसँग यी कुराकानीहरू गरिरहेका छैनन्। मात्र २२% किशोर-किशोरीहरूले आफ्ना आमाबाबुसँग पर्चेको ड्रग्सको खतराहरूबारे छलफल गर्छन् ।
सत्य यो हो कि युवाहरू आफैले वरपरका वयस्कहरूले के भन्छ हेरिरहेका र सुन्दै छन्। किनभने औषधीको दुरुपयोग गर्न औषधीको औषधि प्रयोग प्रायः एक उपेक्षित तरीका हो, te किशोर-किशोरी मध्ये १ जनालाई वास्तवमा उनीहरूका आमाबाबु पर्चेको दुरुपयोगको बारेमा चिन्तित नहुने विश्वास गर्छन्।
प्रिस्क्रिप्सन दुरुपयोगको बिरूद्ध तपाइँको सब भन्दा शक्तिशाली हतियार तपाइँको बच्चाहरु संग कुराकानी सुरु हुन सक्छ।
किशोर प्रिस्क्रिप्शन दुरुपयोगको बारेमा कुरा गर्नका लागि लिपिहरू
दैनिक जीवनमा तपाइँको बच्चासँग कुराकानी सुरु गर्न परिस्थितिहरू प्रयोग गर्नु एक रणनीति हो। यहाँ केहि सम्भावनाहरु छन्।
उच्च रक्तचाप को लागी तुरुन्तै घरेलु उपचार
तपाईले एउटा नुस्खा लिनुभयो
स्कूलमा एक बच्चा नुस्खाको दुरुपयोगको कारण समस्यामा पर्दछ
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दुरुपयोगको बारेमा स्थानीय समाचार रिपोर्टहरू
जब तपाईं किशोर किशोरीहरुसँग लागूपदार्थको दुरुपयोगको बारेमा कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, उनीहरुलाई लागु लागूपदार्थको बारेमा विचार राख्नुहोस्, र स्वस्थ पर्चाको लागी औषधि प्रयोगको बारेमा वार्तालापहरु स्वस्थ जीवनशैलीको बारेमा बृहत्तर कुराकानीमा बुन्नुहोस्।
स्कूल, गतिविधि, र लागूपदार्थको बारेमा तथ्यहरू साझा गर्दै
प्रभावशाली वयस्कहरूले औषधीको बारेमा शिक्षा प्रदान गर्न सक्दछन् जबकि पौराणिक कथाको लक्ष्य किशोर किशोरीहरूले विश्वास गर्न सक्छन्। यदि किशोरकिशोरीहरूले साइड इफेक्ट वा अन्य जोखिमहरू बारे चिन्तित छन् भने, उनीहरूले सोच्न सक्छन् कि लाभहरू जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छन्; सायद किनभने तिनीहरू जोखिमहरू बुझ्दैनन्।
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को बारेमा तथ्यहरु साझा गर्न आमा बुबाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, र केहि बच्चाहरु लाई जान्नु पर्छ।
तथ्य: प्रिस्क्रिप्शन अवैध औषधी जत्तिकै लत हुन सक्छ
कुराकानी बिन्दु: धेरै मानिसलाई थाहा छैन कसरी लत प्रिस्क्रिप्सन औषधीहरू हुन सक्छन्। कहिलेकाँही उनीहरू अवैध लागूपदार्थ भन्दा बढी लत लाग्छ।
अवैध ड्रग्स शहर मा काम मात्र होइन जब यो लत आउँछ। अझै २%% किशोर सोच्नुहोस् कि नुस्खे सडकका लागूपदार्थ जत्तिकै लतका छैनन्। दुर्भाग्यवश, प्रिस्क्रिप्सनको दुरुपयोग सुरक्षित छ भन्ने विश्वास पनि १ 16% अभिभावकहरु द्वारा साझा गरिएको छ।
तथ्य: पर्चेको औषधि स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित छैन
कुराकानी बिन्दु: प्रिस्क्रिप्शन डाक्टरहरू द्वारा दिइन्छ, जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि यो तपाइँको लागि सही हो भनेर तपाइँको डोज जाँच गर्दछ। कुनै पनि औषधि अप्रत्याशित हुन सक्छ वा अनावश्यक परिणामहरू हुनसक्दछ यदि तपाईंले पहिले प्रयोग गर्नुभयो भने। किन तपाईं प्रिस्क्रिप्शन लिनु हुँदैन जब सम्म यो तपाईंको लागि लेखिएको थिएन।
तपाईंको बच्चाहरूको साथ, यो औषधीको दुबै फाइदा र खतरनाक हुन सक्ने सम्भावितलाई जोड दिन महत्त्वपूर्ण छ। प्रिस्क्रिप्शन औषधिहरू प्रत्येक व्यक्तिको लागि आवश्यक छैन, त्यसैले डाक्टरहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू, र फार्मासिष्टहरूले औषधि वितरण गर्नु अघि बिरामीको स्वास्थ्य ईतिहासहरूको पूर्ण मूल्यांकन गर्दछन्।
ओभर-द-काउन्टर औषधीहरूको पनि साइड इफेक्टहरू छन्। तपाईंको किशोरावस्थालाई थाहा दिनुहोस् कि यी साइड इफेक्टहरू अप्रत्याशित हुन सक्छन्, र पछि देखा पर्न सक्छ यदि तिनीहरू पहिलो खुराक पछि देखा पर्दैन। तपाईको शरीरलाई चाहिने औषधी सेवन गर्दा तपाईको शरीरलाई हानी हुने सम्भावना बढ्छ।
तपाइँको किशोर किशोरीहरुलाई पर्चेको दुरुपयोग को जोखिमहरु को बारे मा जान्नुहोस्।
सुस्त मस्तिष्क गतिविधि र सोच
शरीरको तापमानमा परिवर्तन जोखिमपूर्ण उच्च र तल
मुटु, मिर्गौला, वा कलेजो असफलता
मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकको सम्भावना बढेको छ
छुटेको काम, स्कूल र व्यक्तिगत गतिविधिहरू
तथ्य: ड्रग्सले तपाईंलाई स्कूलमा राम्रो गर्न मद्दत गर्दैन
कुराकानी बिन्दु: प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सको दुरुपयोग खेल वा स्कूलमा सुधार गर्न सुरक्षित तरीका छैन। यदि तपाईंसँग एडीएचडी छैन भने, एडरेल (वा समान औषधि) लिने सहयोग गर्दैन किनभने यी औषधि मस्तिष्कलाई प्रोत्साहित गर्न डिजाइन गरिएको छैन। तिनीहरू एडीएचडीको उपचारको लागि बनाइएको हो।
सबैले उच्च प्राप्त गर्न लागूपदार्थको दुरुपयोग गर्दैनन्। इमान्दार, कडा परिश्रम गर्ने किशोरहरूले विश्वास गर्न सक्छन् अनधिकृत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्रयोगका फाइदाहरू छन्।
तपाईंको बच्चासँग कुरा गर्दै जब तपाईं लागूपदार्थको दुरुपयोग शंका गर्नुहुन्छ
यदि तपाइँ श suspect्का गर्नुहुन्छ कि तपाइँको किशोर किशोरीले पहिले नै नुस्खाको दुरुपयोग गरिरहेको छ भने, स्पष्ट योजना बिना प्रतिक्रिया नगर्नुहोस्। यसले तपाइँको बच्चालाई सुरक्षित रूपमा सामना गर्न मद्दत गर्दछ:
सही समय सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तपाईंको किशोर किशोरीहरू शान्त नभएसम्म कुरा गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तिनीहरू उच्च छन्, मतवाला छन्, वा अन्यथा प्रभावमा छन् भने, कुराकानी गर्न पछि पर्खनुहोस्।
अस्पष्ट नहुनुहोस्। तपाईंको किशोरलाई भन्नुहोस् किन तपाईं औषधि प्रयोगको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। तपाईंले खाली बोतल फेला पार्नुभयो? के तपाईंले उसलाई वा उनीले सिफारिस गरिएको भन्दा दुईवटा गोली लिईएको देख्नुभयो? भन्नुको सट्टा, मलाई थाहा छ तपाईं ड्रग्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ! भन्नुहोस्, म चिन्तित छु किनभने मैले तपाईंलाई एकै समयमा तीन वटा गोली लिने देखेको थिएँ, जुन सुरक्षित छैन। के सबै ठीक छ?
शान्त रहनुहोस्। धेरै कडा प्रतिक्रिया र तपाइँको किशोरलाई भड्काउने नगर्नुहोस्। सकेसम्म शान्त रहनुहोस् र तथ्यहरूमा टाँसिनुहोस्। तपाईंको किशोर दु: खी हुन सक्छ र कडा प्रतिक्रिया हुन सक्छ, तर तपाईं आफ्नो प्रतिक्रिया को नियन्त्रण मा रहन चाहानुहुन्छ।
तपाईंको विचार साझा गर्नुहोस्। उनीहरूले तपाईलाई ड्रग्स दुरुपयोगको बारेमा कसरी महसुस गरौं थाहा दिनुहोस् र तपाइँका किशोरहरुलाई सम्झाउनुहोस् कि तपाइँ तिनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ र सहयोगी बन्न चाहानुहुन्छ।
मद्दत खोज्नुहोस्। यदि तपाईंलाई ब्याकअप चाहिएको छ भने स्कूल सल्लाहकार वा नर्ससँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस् कि कसरी तपाईं आफ्नो किशोर किशोरीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केहि उदाहरणहरूमा, तपाईंको किशोर किशोरीको पुन: स्थापना कार्यक्रममा भाग लिनको लागि पूर्ण रिकभरीको लागि आवश्यक हुन सक्छ।
जब सम्भव हुन्छ, स्वस्थ जीवनशैली बाँच्न र औषधी उत्तरदायी रूपमा प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिनुहोस्।
किशोर पर्चेको दुरुपयोग रोक्दै: गुरु र शिक्षकहरूको लागि विचार
एक सल्लाहकार वा शिक्षकको रूपमा, तपाईं सिधा किशोरकिशोरीहरूलाई घरमा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्समा पहुँच गर्न रोक्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं अन्य व्यक्तिहरूको लागि प्रयोग गरिएको औषधीको दुरुपयोगको जोखिममा जोड दिन सक्नुहुन्छ।
केही किशोर-किशोरीहरूले एक भन्दा बढि स्रोतबाट र उनीहरूका आफ्नै अभिभावक बाहेक व्यक्तिहरूबाट लागु लागूऔषधको बारेमा सही शिक्षा सुन्न आवश्यक पर्दछ। शिक्षक र सल्लाहकारहरूले यी बच्चाहरूको लागि सकरात्मक, गैर-अभिभावक संसाधनको रूपमा सेवा गर्न सक्छन्। यस गाईडमा तपाईले कुरा गर्ने पोइन्ट र तथ्या .्क भेट्टाउनुहुनेछ।
लागूपदार्थको दुरुपयोग विरूद्ध लागूपदार्थको दुर्व्यसन र लत
औषधि दुरुपयोग, लागूपदार्थको दुर्व्यसन, र दुरुपयोगको बीचमा भिन्नता रहेको छ। यो एक जटिल विषय हो र लागूपदार्थको दुरुपयोगका कारणहरू जटिल हुन सक्छन्। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि ड्रगिrop्ग कारकहरू अनुचित रुपमा प्रयोग गर्नु र निदानको लत हुनुमा पछाडि ड्राईभिंग कारकहरू उस्तै हुँदैनन्।
प्रिस्क्रिप्शन दुरुपयोग, सबै लागूपदार्थको दुरुपयोग जस्तै, लतको हिस्सा हुन सक्छ वा हुन सक्दैन।
पर्चेको दुरुपयोग: मोटो रूपमा बोल्दा, दुरुपयोगले उनीहरूको निर्धारित प्रयोग बाहिर पर्चेको औषधि प्रयोग गर्दैछ। यसमा कसैको पर्चेको औषधि लिई समावेश गरिएको हुन सक्छ, जानाजानी डोज प्रयोग गर्नु हो जुन प्रिस्क्रिप्सिंग प्रदायक सिफारिस भन्दा ठूलो छ, वा तपाइँको पर्ची प्रदायक द्वारा उद्देश्य नगरिएको उद्देश्यको लागि प्रयोग गरेर।
पर्चेको लत: एक निदान योग्य, जटिल रोग जुन सम्पूर्ण शरीरलाई असर गर्दछ र मस्तिष्क भित्र परिवर्तन गर्दछ। ड्रग एडिक्शन क्लिनिकली ड्रग यूज डिसअर्डर (DUD) को रूपमा वर्णन गरिएको छ।
यदि तपाईंको किशोर किशोरीहरूले औषधीको दुरुपयोग गर्दैछ भने, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंको बच्चाले व्यसनको लागि चिकित्सा मापदण्ड पूरा गर्दछ। लत रोगीको स्वास्थ्य प्रोफाइल र पर्चेको साथ अनुभवको पूर्ण परीक्षण पछि स्वास्थ्यसेवा प्रदायकले मात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ।
तपाइँको किशोर किशोरीहरु द्वारा पर्चेको दुरुपयोग रोक्न भविष्यको लत रोक्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। तपाईं आज कुराकानी सुरु गर्न र तपाईंको बच्चासँग जानकारी साझा गर्न भविष्यमा छनौटहरू र सबै औषधिहरूको लागि निर्णय-निर्धारण गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू वयस्कहरूमा बढ्ने बित्तिकै आजका किशोर-किशोरीहरूले उनीहरूको वरपरको संस्कृतिमा धेरै भन्दा बढि काउन्टर, प्रिस्क्रिप्शन, र अवैध औषधि देख्नेछन्, त्यसैले उनीहरूलाई अब तपाईंलाई जानकारी र अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न आवश्यक छ।
किशोर औषधि दुरुपयोगको बारेमा तथ्यहरू
सर्वेक्षण र मृत्युको कारण रिपोर्टले किशोरावस्थाको औषधि दुरुपयोगको नतिजाको बारेमा खलबलाउने तथ्यहरू प्रकट गर्दछ।
किशोर किशोरीहरूले प्रयोग गर्ने नम्बर १ औषधि के हो?
को भविष्य २०१ 2018 सर्वेक्षण अनुगमन गर्दै , नेशनल इन्स्टिच्युट अफ ड्रग एब्युज द्वारा प्रायोजित, रिपोर्ट गर्दछ कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मध्ये 3.5.%% किशोरले एडेलरल प्रयोग गर्दछन्, १.7% ओक्सीकोन्टिन प्रयोग गर्ने किशोर रिपोर्ट, १.१% किशोरको रिपोर्ट विकोडिन प्रयोग गरेर र ०.8% किशोरले रिपोर्टल प्रयोग गरेर रिपोर्ट गर्दछन्।
किशोर औषधि तथ्या .्क
किशोर र लागूपदार्थको बारेमा जानकारीको लागि सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत वार्षिक देखिन्छ भविष्य (MTF) सर्वेक्षण अनुगमन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको आठौं, १० र १२ कक्षाका विद्यार्थीहरू। सर्वेक्षणले किशोर औषधि प्रयोगको प्रचलनहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रकट गर्दछ। तथ्या्क १ 197 55 मा फिर्ता जानुहोस्।
किशोर औषधि प्रयोग तथ्या 2016्क २०१ 2016
२०१ M एमटीएफ सर्वेक्षणका अनुसार, यहाँ उत्तरदाताहरूले प्रतिशत लिईएका छन् जसले अघिल्लो बर्षमा निम्न औषधिहरू प्रयोग गर्दै थिए (वाफिंग उपकरण तथ्या .्क रेकर्ड गरिएको छैन)।
हेरोइन: ०. 0.3%
किशोर औषधि प्रयोग तथ्या 2017्क २०१ 2017
२०१ M एमटीएफ सर्वेक्षणका अनुसार, यहाँ उत्तरदाताहरूको प्रतिशत छ जसले पछिल्लो वर्ष निम्न ड्रग्स प्रयोग गरेर रिपोर्ट गरेका थिए।
भाप गर्दै: २१..5%
किशोर औषधि प्रयोग तथ्या 2018्क २०१ 2018
कोकेन: १. 1.5%
घरमा प्रिस्क्रिप्शनहरू सुरक्षित राख्नका लागि सुझावहरू
आमाबाबुले उनीहरूको किशोरावस्थाका बच्चाहरूलाई जोगाउनका लागि उनीहरूसँग घरमै भएका औषधीहरूमा कडा नजर राख्नुपर्दछ।
सबै प्रिस्क्रिप्सनहरूको सूची सिर्जना गर्नुहोस् र ट्रफ गर्नुहोस् जब ती रिफिल हुन्छन्। यसले तपाईंलाई याद गर्न मद्दत गर्दछ जब औषधि हराइरहेको छ।
एक बोतलमा गोलीको संख्या गणना गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई शंका लाग्छ केही हराइरहेको छ। कुलसँग तुलना गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई फार्मेसीमा दिइएको थियो।
बारम्बार दुरुपयोग हुने औषधीहरूको लागि, जस्तै पेन्किलरहरू, लक योग्य क्याबिनेट खरीद गर्नुहोस्।
प्रिस्क्रिप्शन दुरुपयोग को लक्षण जान्नुहोस् र व्यवहार र संकेतहरु को लागी हेर्नुहोस् यी विवरणहरु फिट।
तपाईंको किशोरीको डाक्टर, शिक्षकहरू र तपाईंको बच्चाको जीवनमा अन्य वयस्कहरूसँग नजिकको कुराकानीमा रहनुहोस्।
किशोर किशोरीहरूको पालनपोषण जिम्मेवार रूपमा गर्नुहोस्
जस्तो तपाईसँग यी कुराकानीहरू छन्, तपाइँका किशोर-किशोरीहरूलाई कसरी थाहा दिनुहोस् उनीहरू कसरी सही तरिकाले औषधि प्रयोग गर्न सक्दछन् र स्वस्थ रहन्छन्:
तलका सल्लाह र निर्देशनहरू: यो सबै चेतावनी, प्रदायक सल्लाह, र एक निर्देशन सहित समावेश निर्देशनहरू अनुसरण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसले अरू कसैको पर्ची लिने बिरूद्ध मार्गदर्शन पनि समावेश गर्दछ।
बिग्रिएको वा छेडछाड गरिएको औषधी अस्वीकार गर्दै: यदि उनीहरूको औषधी प्रस्ट देखि क्षति पुगेको छ, छेडछाड गरेको छ वा म्याद सकिएको छ भने के गर्ने बताउनुहोस्। उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि उनीहरूले आफ्नो सामान्य बुद्धिमत्ता सुन्नु पर्छ र उनीहरूको डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग कुरा नगरी बिग्रिएको वा असुरक्षित जस्तो देखिने कुनै पनि औषधि लिनबाट जोगिनुहोस्।
औषधि भण्डारण गर्दै: किशोरहरूले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि उनीहरूका आफ्नै नुस्खेहरू साना बच्चाहरूबाट टाढाबाट र टाढा राखिएको छ। यदि प्याकेजि्गले विशेष भण्डारण निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ, तिनीहरूलाई पालन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
अनावश्यक साइड इफेक्टहरूको बारेमा कुरा गर्दै: साइड इफेक्टहरू निर्धारित चिकित्सक वा फार्मासिष्टलाई रिपोर्ट गर्नुपर्दछ। प्रदायकले डोज परिवर्तन वा औषधि समायोजन गर्ने निर्णय गर्न सक्दछ।
Contraindication र अन्तर्क्रिया थाहा छ: प्रिस्क्रिप्शन र अधिक काउन्टर औषधी एक अर्को र सामान्य रूपमा प्रयोग पूरक संग कुराकानी गर्न सक्छन्।
ध्यानपूर्वक लेबलहरू पढ्नुहोस्: किशोरहरूले यो थाहा पाउनुपर्दछ कि लेबलहरू र बाकस ईन्सर्टहरू पढ्न यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।
विश्वसनीय अनलाइन श्रोतहरू खोज्दै: इन्टरनेटमा केहि खराब जानकारी छ, तर विश्वासीलो साइटहरू वेबएमडी र मेयो क्लिनिक साइट वैध स्वास्थ्य जानकारीको स्रोतहरू हुन्छन्, पर्चेको बारेमा जानकारी सहित।
समर्थन बाहिरी समर्थन: विश्वसनीय वयस्कहरू जानकारीको गैर-अभिभावकीय स्रोत हुन्।
प्रश्नहरू सोध्नु: बच्चाहरूलाई उनीहरूको फार्मासिष्ट र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ यदि उनीहरूसँग पर्चेको प्रश्न छन्।
तपाइँको किशोर किशोरीहरूलाई कसरी सही तरिकाले औषधी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाएर, तपाइँ उनीहरूको बाँकी जीवनको लागि औषधिहरू र अन्य औषधिहरूको स्वस्थ दृष्टिकोण सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ।
सबैभन्दा सुरक्षित इरेक्टाइल डिसफंक्शन पिल भनेको के हो?
कसरी छिटो खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
जहाँ मेरो नजिक नि: शुल्क फ्लू शट प्राप्त गर्न को लागी
वयस्कों मा थ्रश मुख को लागी घरेलु उपचार
प्राकृतिक तरीकाहरु एक खमीर संक्रमण को उपचार को दौरान गर्भवती